Colaad ku Garaadsaday - Hoygamaansada
Waxaan ahay gaban Guluf lagu hoobtiyo Xabad la ganaayo iyo Ku garaadsaday colaadoo Galina arag barwaaqee. Caweyskanna guureynta Waxa igu gaar yeeloo Iga keenay gurigeenoo U gabaadsanaya hawdkaan Waa Nabad baadi goobkeedee. Ragbaa u guntaday Godob in ay naga galaanoo Nagu gil gilaan madaafiic iyo Gumad rasaaso Galaafata nolashena'oo Diwaankana galiyaan Gaajada iyo bacadkan Golle in ay inoo ahato Hurdaba gam'i weyno. Guurti iyo Culumo Indheer garad ma daayaan'oo Garaadkoodu wuxu yahay Guulaan oran mooyee Gabigeen xabaalaha In ay mar qura na galiyaan. Waxba ma gocosho ooyayee Garbey u lahayd nafteyda Galad nabadeed iyo Guud ahaan asaagey Inta dunida guud joogta Taclintey gaarka u heleen iyo Miraha Nabadey gurtaan. Aan gaabiyo tabashade Gunaanudkuna wuxu yahay Soomaalaay garo dhalishoo Gabi aynigeen Waa kuwaa goor hore Dayax gacmeedyo u ganay cirkiyo samada kore Inaguna gadaasoo kale Garawshiyihu wa ma huraane Golle in aynu ku kulano Gorfeyno umuurahoo Colaadan ina kala gaabisay iyo Qabyaalada guunka ah aan gorofkeeda tuurnoo idilkiinba gacalayaal Aan gocla orad u galno Ku dhaqaaqno galabtaba. Guusheenu halkey taal.